Kanjani Lizunov ngaphandle PVA glue ekhaya?
Nikeza ingane imizwelo eyakhayo, simenze Lizunov - ". Ghostbusters" ithoyizi sibonelo okuyinto ghost we ifilimu ethandwa kwekhulu elidlule Kanye ngokuletha kumnandi, ukwenzela ukungena okuncane kakhulu welulela, ukusabalala futhi ayinaso ukuma njalo.
Nakuba lokhu ithoyizi zingathengwa esitolo iyiphi zezingane, futhi kulula ukwenza ngokwakho. Unquma onjani ukuminyana nombala ukwenza Lizunov. Kukhona inala ongakhetha kanjani ukwenza Lizunov ekhaya ngaphandle PVA glue. Ngezansi sibheke ezinye zalezi.
Senza Lizunov of insipho
Indlela yokwenza imoto ngaphandle Lizunov ka PVA glue? Kuyinto engenzeka ngempela akunzima. Ukuze ukukhiqizwa yayo, uzodinga izingxenye ezikhona kuyo yonke imizi ikhona:
eshaweni gel noma yokugeza izitsha ketshezi.
Ukuze uqale, khetha isitsha lapho enkulu alinganayo mix imoto bese eshaweni gel (uketshezi yokugeza izitsha). Kubalulekile ukuthi izimali zingenalo elimbudumbudu ke Lizun ujike okusobala. Ngemva ukuxubana uze uthole unama bushelelezi, bese ukubeka isitsha nge ingxube esiqandisini.
Ngakusasa, ungakwazi ukunikeza ingane ithoyizi. Kodwa kumelwe uqiniseke ukuthi sidonse Lizunov emlonyeni wakhe, wageza izandla zakhe ngemuva komdlalo. Lizun ezinjalo kufanele ubekwe kwisiqandisi esitsheni evaliwe. Futhi, kufanele aphonswe out uma nalipnet eziningi udoti. Njengoba kuyingcwelengcwele kuye Lizun ilahlekelwa impahla yayo. Ngaphezu kwalokho, esiphezulu eshalofini yokuphila - ngenyanga.
Kuyinto Lizunov ophephile, okuyinto efanelekayo umdlalo, ngisho izingane ezincane. Ikakhulukazi, uma esetshenziswa kuyoba udayi yemvelo esikhundleni ukudla. Nakuba kulesi simo kodwa ayikhanyi kakhulu ngakho ukuze uthole ithoyizi.
Manje sibheke indlela yokwenza Lizunov ngaphandle PVA glue tetraborate. Njenganoma iresiphi odlule, udinga izinto kukhona ususondele ngasiphi wekhaya:
kanjani Lizunov ngaphandle PVA glue? Okokuqala, thatha isitsha noma yimuphi omunye isitsha ejulile. Seva ke ezimbili izinkomishi ufulawa, ngakho Isisindo eyohlobo futhi kulula ukupheka. Bese wengeza amanzi abandayo, bese kushisa, kodwa hhayi abilayo, mayelana inkomishi ikota ngalinye. Manje kudingeka ugovuze ingxube kuze bushelelezi, kubalulekile ukuthi kwakungekho izigaxa.
Ngemva kwalokho, engeza amaconsi ambalwa udayi: ukudla noma yemvelo - it is incike isifiso sakho. Govuza futhi baba ingxube okunamathelayo. Yibe usubeka isitsha esiqandisini amahora ambalwa. Lizun Lapho selehlile ngokuphelele, kungaba ukunikeza Daze ngoba umdlalo.
kanjani Lizunov yamanzi ngaphandle PVA glue? Ake sicabangele isenzo esisodwa enye inketho ukudala ithoyizi. Kuba bezimo lula ukhiqiza kubhekwa emvelweni kakhulu. Ukuze wenze lokhu uzodinga:
isitashi (corn can);
kanjani Lizunov ngaphandle PVA glue? Ngezabelo alinganayo mix ngamanzi afudumele futhi isitashi kuze homogenous (akukho izigaxa) mass. Engeza udayi futhi aphinde uhlanganise kahle ke isimo amabhola kusukela mass okuholela. Futhi manje - Lizun ngomumo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izinga lokushisa kwamanzi kufanele kube ekamelweni lokushisa noma abandayo - ke uxove Lizunov nzima. Ngaphezu kwalokho, ungabeki isitashi kakhulu ngenxa yalesi izace ziqinile.
kanjani Lizunov ngaphandle sodium ne PVA glue? Kukhona izindlela eziningi. Manje thina sibheke kwesilandelayo. Plus Sliema plasticine ukuthi akusho ukusakaza, ukugcina ukubukeka wamnika. Sebenzisela okwenza kube izinto ezinjalo:
kanjani Lizunov ngaphandle PVA? Okokuqala singaba usizo kabi isitsha kwensimbi. Score ke amanzi abandayo. Kube chaza gelatin e ingxenye, okuboniswe kwi isembozo. Okulandelayo, shiya ke sokunika ihora. Emva kwalesi sikhathi, ubeke isitsha phezu komlilo - ketshezi kufanele ziqale ubilise. Uma lokhu kwenzeka, kubalulekile ukususa ngenxa yokushisa.
Ngokuzayo uma kudingeka zishise ezandleni ubumba (mayelana 100 amagremu). Khona-ke kubalulekile ukuba uthele amanzi esitsheni plastic (50 ml). Khona-ke, usebenzisa spatula, mix it nobumba. Manje uthele gelatin nobumba is wayixova kuze uze uthole unama bushelelezi. Futhi yokukhiqiza isinyathelo sokugcina - ukubeka ngxube esiqandisini ngaphambi ukuqedela indlu.
Futhi amanye amathiphu ambalwa ekwenzeni
Thina esiphethweni kanjani ukwenza ngaphandle Lizunov PVA glue isitashi, kodwa musa njalo uthole it right njengoba kufanele. Ngoba okunye uzicabangele izinto ongakhetha kuzo futhi izizathu zokuthi kungani futhi yini okumele uyenze uma uthola ukwenzela ukungena okuncane kakhulu okungalungile.
Yiqiniso, okuningi kuncike izinga izimpahla ezisetshenziselwa womshini Lizunov nakho kubalulekile isilinganiso sazo kula manzi. The zokupheka banikwa ukunemba ngaphandle, kodwa ngoba une lapha bubanti nokucwaninga nge ukuthungwa Lizunov.
Kuthiwani uma Lizunov ukufana sinqamukile? Kulokhu, kuyafaneleka imizuzu embalwa uhlanganise kahle. Ngemva kuyo iyoba viscous futhi eyohlobo.
Uma kuwukuthi okunamathelayo kakhulu - imicu kokufinyelela spoon bese unamathela kulo iminwe ukuze nje akuyona kude ngemuva - yingakho, ingxube kufanele kancane Ziyancibilika. Lapha ungakwazi ukusiza esincane isitashi uketshezi noma amanzi ethafeni, kuye indlela yakho oyikhethile yokukhiqiza Lizunov.
Kungenzeka, futhi aba amaSheshi, mass ifinyelela, kodwa akusho unamathele iminwe yakho. Isizathu kulokhu ketshezi ngokweqile Lizunov. Uma lokhu kwenzeka, kumele ushise ikhambi okweqa powder, isitashi noma amanzi. Noma ungakwazi ukwengeza kancane kunenze nisondelane esizidingayo, ezifana ufulawa. Khona-ke mass uyaphinda wayixova.
Ekugcineni, inkampani encane
Manje ngoba sewuyazi ukuthi ungakwenza kanjani Lizunov ngaphandle PVA. Uma wenza ithoyizi, kufanele ulandele ukwenza ingane yakho ozithandayo akuyona aphonswe Lizunov odongeni, kungenjalo sangemuva izohlala amabala oily. A Umdlalo we Sliema ezindaweni ukungena nakwamanye amazwe, izinwele banamathele ku ithoyizi.
Kubalulekile ukwazi ukuthi igama elithi sokusebenza kwalo, omunye isilinganiso nengxenye kuya emasontweni amabili. Futhi phakathi Lizunov imidlalo kufanele agcinwe kule esiqandisini, kodwa hhayi efrijini. Ngaphandle ukukhohlwa bawubeke esitsheni avalwa ngesivalo noma esikhwameni ngepulasitiki. Lokhu kwenziwa, ngakho-ke akuveli zome ngenxa uxhumane ne air evulekile.
Futhi, ukunweba inkonzo Sliema, zingase zihlanzwe kanye utshwala ukususa ukunamathela uthuli. Akubalulekile ukugeza kuyo usinki - ingozi Lizunov uxubha phansi abakhwabanisi. Kodwa lapho eqala ukulahlekelwa impahla yabo, nje ukwengeza amanzi kancane.
Futhi into ebaluleke kakhulu ukukhumbula: njalo ngemuva komdlalo nge Lizunov kudingeka ugeze izandla zakho ngensipho labo izingxenye zomzimba, nabo ayehlangana nabo. Ukuthi ingane akuyona ukusabela nomzimba.
Indlela yokwenza rose aphume iphepha isipho?
Textile unodoli-umntwana: iphethini, incazelo inqubo yokudala
Kanjani ukwenza nunchuck ukuze kuqeqeshwe abafundi? izikhali Martial ngezinto ezahlukene
Amathiphu Wabasaqalayo sendlela thunga ivesti noboya itshali
Uhlelo lokudala izinhlelo Stitch engu-
Cover esihlalweni ngezandla zakhe uyakwazi diversify Ingaphakathi
Ukwakheka Spirogyra - nomele evamile umnyango ulwelwe Green
"Merry Uqala i" I-primary school: iskripthi
Isakhiwo majora labia. I physiology insikazi izitho zangasese
Izinyawo hob: ukufakwa isithombe. Yikuphi isokhethi ukukhetha ngenxa hob? Yini isokhethi iyadingeka ukuze hob?
Markoni Gulelmo: kokusungulwa, amaqiniso ezithakazelisayo, biography
Hikikomori - a syndrome ... hikikomori. ukuba abe hikikomori kanjani
Aluminium kurediyetha: Izibuyekezo nokuba yinkimbinkimbi ukukhetha
Eudemonism - Iyini? izibonelo eudemonism
Indlela yokwenza canapes izingane
Indlela ukuhlukanisa kukhwehlela esomile kusukela ezimanzi: ukubonakaliswa main, izimpawu kanye nezincomo
Credit card "Alfa-Bank": izimo, zenzalo, imithetho yokubhalisa, imibono kanye nokubuyekeza